Salaadda Saint Alejo. ? Si Looga Saaro Qof, Jaceyl, iyo Cadow
7 Akhriska Min
Salaadda San Alejo waxaa la sameeyaa marka aan u baahanahay in aan xoogaa fogeynno annaga iyo qof kale maxaa yeelay markii ay ku xirneyd go'aan ka gaarista ah inuu ka guuro isaga sidaas ayuu sameeyay isaga oo aan eegin.
Ducada ina xoojisa oo ina siisa dareen ka go'ay kuwa aan wanaaga sameynin ama gudbiya tabar darrada xun.
Si la mid ah salaaddaan waxaa loo sameyn karaa in laga saaro saaxiibtinimada xun qaraabada aadka ugu dhow.
Waa qalab naga caawinaya inaan ilaalino kala dambeynta guriga iyo in iimaankeenu maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhayo
1 Waa kuma San Alejo?
1.1 U soo ducee Saint Alexius inuu qof kaxeeyo
1.2 Ducada San Alejo si loo kala saaro dadka iyo dadka jecel
1.3 Si looga hortago cadawga
Waa kuma San Alejo?
San Alejo, oo noloshiisa difaac u ahaa Caqiidada masiixiga. Wuxuu ku noolaa welwel xagga baraya dadka kale aasaaska aasaasiga ah ee iimaanka. Way quusteen oo diideen qaar laakiin macallinka weyn ee dadka kale.
Lama yaqaan taariikhda rasmiga ah ee dhalashadiisa maantana waxaa lagu yaqaan inuu ka mid yahay Quduusiinta inaga caawiya xalinta xaaladaha adag ee shaqsiyeed.
Nin awooday inuu uga tago xoolo iyo qoys dartiis Masiixa dartiis, rumaysadkiisa aan libiqsanayn ayaa ku taageeray markuu socdo jidadka isagoon saqaf iyo sahay midna haysan laakiin ujeedada adag ee ah fidinta boqortooyada llaah isagoo ereygiisa dadka oo dhan ugu wacdiyaya dunida.
Isaga ayaa naftiisa u huray gaar ahaan carruurta, si loo baro ereyga Ilaah iyadoo lagu beddelayo qaniinyada cuntada. Tusaale ku dayasho mudan jacayl iyo u heellan iimaan.
U soo ducee Saint Alexius inuu qof kaxeeyo
Oh Ale Aleusus barakeysan
Tusaalaha qaaliga ah ee jacaylka
Inaad u adeegto qofkasta oo aad awoodid adoo aan ka fileynin wax soo celin
Waxaan u nimid inaan ku ducaysanno
Oo aan ku tusno hanuunkeena
Sababta oo ah is-hoosaysiintaada, iyo dhiibitaankaaga, waxaad kasbatay jacaylka Ilaah
Maanta waxaan u imid inaan ku weydiisto raallin
In aad iga qaado qof aan jeclayn, oo xanuun badan igu kicisa
Sidaad uga soo tagtay waalidkii
Inaad karti u yeelato inaad ku korto ruuxi ahaan
Ka bax noloshayda ilaa (magaca qofka), si aad nabad ugu noolaan karto
Wax yar i baro jacaylka aad deriskaaga u fidisay
Si loo barto sida loo dulqaato
Dadka aan loo baahnayn, oo annana aannan kala fogaan karin
Adiga oo ku sugan midigta Ilaah
Waxaan kaa codsanayaa inaad ii duceyso indhahaaga hortooda
Si aad nimco hortayda ugu hesho
Ka dhigista qof wanaagsan
Oo sidaas ayaan noloshayda ugu duceyn karaa
Oo wax yar iga sii farax
Sababta oo ah in lala wadaago qofkani waa nolol run ah
Waxaan kuugu mahad celinayaa San Alejo oo barakeysan
Anigoo dhageysanaya tukashadayda
Oo waxaad i siisaa taageerada shuruud la’aan ..
Ma jeceshahay ducada San Alejo inaad qof kaxeyso?
Ka fogaanshaha qofka waxay noqon kartaa, xaaladaha qaarkood, tallaabo adag oo la qaado waxaana jira xaalado noo horseeda inaan u dhowaanno dadkaas aan dooneynin.
Tani waa sababta salaaddan ay u xoog badan tahay maxaa yeelay waxay naga caawineysaa inaan noqonno qofka nafsad ahaantiina nooga tago.
Way shaqeyneysaa haddaan u shaqeyno si aan annaga nooga faa'iideysanno sida xubin qoyska ka mid ah, sida cunugga, oo badanaa sameeya saaxiibo aan wanaagsaneyn, ka hor inta dhaawaca uusan ahayn mid aan la dafiri karin, waxaa ugu wanaagsan inaan weydiisano San Alejo inuu sii hayo qof
Ducada San Alejo si loo kala saaro dadka iyo dadka jecel
San Alejo, kuwiinna awoodda u leh inaad ka fogaataan sharka oo dhan ee kuwa Rabbiga doortay, waxaan idinka codsanayaa inaad sidoo kale u guurtaan ...
Laga soo bilaabo ... (Sheeg magaca gacaliyaheeda) Waan kuugu yeerayaa, waxaan kaa codsanayaa inaan kaa kaxeeyo, ilaa ... (Mention garee magaca gacaliyaheeda) U kaxee (ama) gobolka la ilaaway, Mar dambe yaanay ka talaabin dariiqa ention (sheeg magaca lamaanahaaga).
Sida durdurrada biyuhu u socdaan, u orod ... (Xusuus magaca magaca lammaanahaaga) Laga soo bilaabo ... (Xusuuso magaca qofka aad jeceshahay) Weligaa.
Sidii ayay u timid ... (Ku sheeg magaca qofka uu jecel yahay) Nolosha ... (Xusuuso magaca lammaanahaaga) Inuu isagu isla markiiba ka baxo noloshiisa.
In aysan wada joogi karin ama qolka fadhiga, ama qolka cuntada, ama miiska ay wax ku cunaan, in aynan haysan karin asturnaan iyaga mooyee mid aan isu yeelin karaahiyo iyo nacayb midba midka kale u qabo.
Waxaan ku weydiinayaa San Alejo, haddii ay ogaadaan inaysan is arkeynin, haddii ay hadlayaan ... (Kuxir magaca lammaanahaaga) Iyo ... (Kuxir magaca qofka aad jeceshahay) inaysan is fahmin mar dambe iyo in kala goysku yahay kan ugu dambeeya iyo weligiis. Waxaan weydiisanayaa ruuxa wadada inuu ka gooyo dhamaanba khadadka laga soo bilaabo…
Waad ku mahadsantahay San Alejo imaatinkeyga amarkan.
Waxaan kaa codsanayaa inaad ku soo celiso rafiiqayga dhinacayga toobad keena, waxaanan balan qaadayaa inaan ku sii faafiyo ducadan oo aad ugu mahadsantahay sida wanaagsan ee la iigu deeqay!
U soo ducee ducada St. Alejo si loo kala saaro laba qof oo leh iimaan weyn.
Xiriirka lamaanaha, qeybaha seddexaad had iyo jeer waa lagu kala tagaa. San Alejo wuxuu naga caawiyaa sii wadida wada noolaanshaha xiriirka lamaanaha iyada oo aan dhinac saddexaad laga beddelin.
Wuu ogyahay qiimaha dhabta ah ee qoysku leeyahay waana sababtaas sababta uu nooga caawiyo inaan kaxeyno dadkaas ku hanjabaya inay gurigeenna duminayaan.
Dhib malahan hadii ay tahay a saaxiibtinimo fudud ama horay u dhacday inuu noqdo xiriir jaceyl, Salaaddan waa mid awood badan oo wax ku ool ah.
Si looga hortago cadawga
Saint Alejo ee sharafta leh, oo ah boqorka koowaad ee Aleksandariya, ha i dayrin habeen iyo maalinba, Waxaan kaloo kaa baryayaa inaad i ilaaliso oo aad iga leexiso cadaawayaasha si xun u caabuda.
I badbaadi oo iga ilaali awooda shaydaanka, ragga sharka ah, xayawaanka xun iyo saaxirad iyo sixir. San Alejo, San Alejo, San Alejo, saddex jeer waa inaan ku soo wacaa.
Markasta waa la ii bixiyaa, si aad sharrowga oo dhan iga badbaadisid.
Saddex iskutallaab oo waxaan kuu soo bandhigayaa, taas oo ah calaamad Masiixi ah oo wanaagsan, si aad u ciqaabto gacanta dambiilaha, oo u tilmaamto villain-ka doonaya in uu aniga igu qaldamo.
Tani waxay jebin doontaa carrabka kuwa doonaya inay iga hadlaan.
Waxaan ka baryayaa San Alejo xooggaaga ah inaadan ka tagin hareeraha gurigayga iyo in wax kasta oo cagahayga ku jira ay noqdaan waajibaadkayga. Aamiin. Ciise
San Alejo de León, haddii qof doonayo inuu i khiyaaneeyo, Ilaah ha u oggolaado baalashiisa qalbigayga ka soo dhacaan oo ii hoosaysiiya sida Ciise u yimid cagaha iskutallaabta.
Hadaad rabto inaad ka fogaato cadawga, kani waa salaadda saxda ah ee loo aado Saint Alexius.
Waxaa jira kuwa moodaya inay cadawgu ku dhowyihiin inuu fiirsado, laakiin waxaa jira cadaawayaal ay ufiican tahay in la haysto, tani haddii ay cadowgu toos yahay.
Laakiin waxaa jira kiisas aad uga sii daran oo ah dadka la sameeyay saaxiibbadaa dhex mara laakiin runtiina iyagu waa cadow.
Xaaladahan ducada San Alejo ayaa naga caawinaysa naga fogeeya si dabiici ah iyo dhibaatooyin la'aan.
Wuu ogyahay waxa ay tahay in la yeesho cadaawayaashayda ugu dhow waana sababtaas uu u noqday Saint, isaga oo ka caawinaya dadka in ay nabad helaan inkasta oo xaalado kala duwan oo adag oo na soo food saaray. Ka fogaanshaha qoyska iyo asxaabta ma aha wax sahlan laakiin inta badan waa adag tahay lagama maarmaan.
Saint Alexius, adiga oo ku guuleysta wax walba, Adiga oo ku guuleysta inaad waxkasta aragto, waa wax iska cad In aad kala soocdo ruuxayga oo aad garowdo in jiritaankeygu uusan laheyn jacayl, Meherkeyga Quduuska ah, iga caawi inaan badbaadiyo jaceylka, Lammaanaheyga wuu iga tagey mid kale / ama waa layga beddelay, Samee kiimikada u dhaxaysa jeexjeexa, Samee kala fogeynta.
San Alejo, samee jacaylkaaga kala duwan, Ka takhalus isaga / iyada, igu soo noqo, Inaadan ku guuleysan la'aan la'aan ama riyo, In dhinaceygaagu uusan ahayn qof wanaagsan, In aniga ayaa ah kan noloshaada ku jira, koox, fikirkaaga iyo khayaalioyinkaaga.
Jacaylka aniga ii gaarka ah, in uu wali yahay, In shisheeyuhu ka baxo noloshiisa, Shakhsigaas aniga iyo aniga dhex taagan, Ha laga daayo doonistiisa, San Alejo, Jacaylkaas ayaa i quseeya.
Waxaan ka codsanayaa inuusan isagu / iyadu la joogi karin isaga / in, in noloshiisu ayan ahayn wax aan ahayn, haddana aan dib ugu soo noqdo, in jacaylkaygu yimaado, San Alejo, ayaan u baahanahay, Hagaag isagu / iyadu waa kan ugu muhiimsan.
Ausculta tukashadayda iyo baryadayda, oo aniga ila tashana.
Ducadan waxay u tahay Saint Alexander jacaylka waa mid aad u xoog badan!
Baahida loo qabo in la jeclaado oo lagu jeclaado ayaa had iyo jeer ujeeddooyinka ugu awoodda badnaa salaadda. Awood u helida jacayl iyo sameynta guri, qoys wada noolaansho leh iyo aragtida carruurtu koreyso waa khibrad nololeed aad u qurux badan oo dhammaan dadku u qalmaan inay ku noolaadaan.
Si kastaba ha noqotee, wuxuu u sheegaa qaar ka badan kuwa kale tanna waxaa u sabab ah damaca xun ee hadda u muuqda inuu ku badan yahay qalbiga.
San Alejo, markii uu dhulka ku jiray wuxuu ku noolaan karayay jacaylka noocan ah maxaa yeelay wuxuu lahaa qoys ka hor inta uusan isu dhiibin si buuxda Ilaahay.
Laakiin jacaylku halkaas kuma iman laakiin wuxuu ku koray oo isu beddelay awood aan ilaa maanta samayn mucjisooyin yaab leh.
Weydiista mucjiso inuu helo jacayl run ah waa ficil iimaan leh oo had iyo jeer jawaab deg deg ah lahaan doona maxaa yeelay wax walba oo aabaha ku weydiino magaca Ciise, aabaha wuu ina siin doonaa.
Ka faa'iidayso xoogga salaadda oo dhan San Alejo!
Ducada gabadha bikradda ah ee Fatxiya
CUNTADA Si aad u barato CULEYSKA LASO CULIS LUMIS | CAAFIMAAD DAAWASHADA Baybalka CAAFIMAAD Sidee Dios Kala Duwan Ujeeddo Ereyada Interpretación de los sueños Halyeeyada Matemáticas Salaada Popular Santos Qeyb la'aan Riyooyin Miisaska Tarot Whatsapp
Talooyin Shabakadaha Bulshada